Reysal Wasaare Kheyre: Inkastood Na Gargaarteen, Hadda Waxaan U Baahanahay Maalgashigiina – Kalfadhi
Reysal Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre, ayaa ugu yeeray Dowladaha ku jira Ururka Iskaashiga Islaamka, oo loo soo gaabiyo OIC, in ay maalgashadaan dalka Soomaaliya, oo uu ugu yeeray “Soomaaliyada Cusub”. Waxa uu sheegay inuu OIC uga mahadcelinayo gargaarka ay siinaayey Soomaaliya intii ay dowlad la’aanta ahayd, “laakiin waxa ay hadda u baahan tahay” buu yiri “Soomaaliya inuu ururku soojiito maalgashashada Soomaaliya.
“Inkasta oo aan ku faraxsanahay gargaarka iyo kaalmeynta kale ee aad siineyseen Soomaaliya, waxaan doorbideynaa inaan idinla yeelano ganacsi iyo inaan idinku soojiidano maagashigiina. Waxaan rabnaa in ay OIC ka faa’iideysato fursadaha maagashiga xawliga ah ee ka jira Soomaaliyadaan cusub” ayuu yiri Reysal Wasaare Kheyre, oo furayey Shirka Kooxda Xiriirka Soomaaliya ee Ururka Iskaashiga Islaamka, oo maanta Muqdisho ka furmay, kuna soo xirmay.
Kheyre waxa uu sheegay in OIC, oo taageerta Soomaaliya, ay keeni karto in ay horay u socoto Soomaaliya, oo ay soojiidato ganacsiga iyo maalagashiga aduunka, iyadoo, sidookale, ku heli karta isbaheysi ka gacan siiya arrimaha ammaanka dalka. “si aan ugu guuleysano waxyaabaha ugu muhiimsan, waxaan idinkaga baahanay taageero ficil ah labada sano ee soo socota, taas oo aad nagu siineysaan waalnimadiina” ayuu yiri Reysal Wasaaraha Soomaaliya.
Taageeradaas waxa uu Mudane Kheyre sheegey in ay kaalin ka qaadan doonto shaqooyinka aasaasiga ah ee dowladnimada Soomaaliya, sida adeegga dowliga ah iyo shaqo abuurka, “oo muhiim u ah” buu yiri “dhalinyarada Soomaaliyeed, oo ah kuwa ugu badan dadka Soomaaliya”.
Intii uu ku jiray furista shirka ayuu Reysal Wasaare Kheyre ammaanay xukumaddiisa, isagoo sheegay in 18-kii bil ee la soo dhaafay ay dowladdiisu qabatay shaqo adag, si ay u gaarto ahdaaf waaweyn, oo heer qaran ah, “iyadoo dib u qaabeyn ku sameysay” buu yiri “hay’adaha Dowladda Soomaaliya”. “Waxaan ka sameynay hormar qeybaha aan dib u qaabeynay oo dhan, sida ammaanka, dhaqaalaha, hormarinta siyaasadda loo dhan yahay iyo adeegga bulshada” ayuu yiri Reysal Wasaare Kheyre.
Waxa uu sheegay in ay afartaas tiir ahayd waxa ugu weyn ee ay dowladdiisu ku mashquulsaneed 2-dii sano ee dhamaatay. OIC ayuu ku bogaadiyey in ay kaalin ka qaadatay shaqadii uu sheegay in ay ka qabteen tiirarka uu xusay, taas oo uu sheegay in ay kusoo gaareen meesha ay xukumaddiisu joogto maanta. “Ka hay’ad ahaan iyo xubin ahaanba, waxaan ku faraxsanahay shaqada adag iyo go’aankiina aad ku suurageliseen inuu kulankani dhaboobo” ayuu Kheyre ku yiri Xubnaha OIC ee shirkaasi maanta ka qeybgalay.
Golaha Shacabka Oo Ka Dooday Hindise Sharciyeedka Maamulka Maaliyadda